काेराेनाकाे संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्दै देशभर कडा लकडाउनकाे घोषणा - hamrosandesh.com – Hamrosandesh.com
एजेन्सी, १३ कार्तिक ।
फ्रान्समा काेराेनाको दोस्रो चरण झनै कठिन र विनाशकारी हुने भन्दै राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरिएकाे छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले फेरि राष्ट्रव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेका छन् ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोन
टेलिभिजनबाट सम्बाेधन गर्दै उनले कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले लकडाउन लगाउनुपरेको बताएका छन् । फ्रान्स सरकारले नागरिकलाइ सकेसम्म घरबाहिर निस्कनै नदिने र निस्कनुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरूले कडा नियमहरू पालना गर्ना आह्वान गरेकाे छ । सरकारले आफ्ना नागरिकलाइ बाहिर निस्कनुपर्नेहरूलाई फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ ।
लकडाउनसँगै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सिमाना पनि बन्द हुनेछ । प्रवेश गराउनै परेमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका कडा मापदण्ड बनाइएको र त्यो पालना गरेपछि मात्रै प्रवेशका लागि अनुमति दिइने भएको छ । अहिले घोषणा गरिएको लकडाउन आगामी डिसेम्बर १ तारिखसम्म लागू हुनेछ ।
फ्रान्समा अप्रिलयता कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या उच्च भएको छ भने मंगलबार एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३३ हजार जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । ‘संक्रमित र मृतकहरूको संख्या हेर्दा महामारीले फ्रान्समा डरलाग्दो अवस्था लिन सक्ने देखिएको छ ।
महामारीको दोस्रो चरण धेरै कठिन र विनाशकारी हुने देखिएकाले त्यस्तो खतरातर्फ जान नहुनेमा राष्ट्रपति एम्यानुएल म्याक्रोनले जोड दिए । म्याक्रोनले महामारीको वेगलाई बढ्न नदिन फ्रान्सले अब निर्मम तरिकाले ब्रेक लगाउनुपर्ने बताए । उनले कोरोनाका बिरामीको चापले फ्रान्सका अस्पतालहरूका सघन उपचार कक्षहरू आधा भरिसकेको जानकारीसमेत दिएका थिए । नयाँ घोषणा गरिएको लकडाउन शुक्रबारदेखि लागू हुनेछ ।
भिडभाड गर्न हुन नपाइने गरी यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि कायमै रहेको उनले जानकारी दिए । लकडाउनका वेलामा रेस्टुरेन्ट बारहरू बन्द रहनेछन् भने विद्यालय र ठूला कारखानाहरू भने खुल्लै रहने जनाइएको छ ।
ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गरिएको र ती उद्योगहरू सञ्चालन भएपछि अर्थतन्त्र पनि धानिने उनको विश्वास छ । यसअघि, जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलले पनि आफ्नो देशले नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने र कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सबैलाई सतर्कता अपनाउन आह्वान गर्दै रातको समयमा कर्फ्युको घोषणा गरेका छन् ।
युरोपेली थुप्रै देशहरूमा महामारीको दोस्रो चरण फेरि तीव्र रूपमा बढिरहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । ती केही देशले पनि महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै रातको समयमा कर्फ्यु लगाएका छन् राष्ट्रपति म्याक्रोनले स्वरोजगार व्यवसायी, पसलेहरू, साना व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मध्यम व्यवसायीलगायतका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने घोषणा पनि गरेका छन् । एजेन्सीकाे सहयाेगमा
के धोएर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ सर्जिकल मास्क ?
डा. पर्शुराम घिमिरे, जनरल फिजिसियन – सर्जिकल मास्क र एन–९५ मास्क एकपटक लगाइसकेपछि पुनः...
लिस्बनमा एक युवाले गरे आत्महत्या !